Amacandelo ama-7 e-SEO amaQhinga aphambili ekufanele ukuba uwathumele ngo-2016 | Martech Zone
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ndikubhalile oko I-SEO ibifile. Isihloko sasiphezulu ngaphezulu, kodwa ndimi kumxholo. UGoogle wayekhawuleza abambe ishishini elalinee-injini zokukhangela kwaye zikhokelela kumgangatho weinjini zokukhangela ziyehla kakhulu. Baye bakhupha uthotho lwee-algorithms ezingakhange zenze kube nzima ukusebenzisa i-rankings yokukhangela, bade bangcwaba abo babafumene besenza i-SEO emnyama.
Oko akutsho ukuba indawo ayifanele ilungiselelwe uphando lwezinto eziphilayo. Kuphela ngabaqeqeshi be-SEO ababenqumle ubuchule babo kwi-backlinking kunye nokubeka indawo bazifumana bengasebenzi. Khangela iingcali ezinje iarhente yethu uxele kwangaphambili utshintsho kwaye walumkisa abathengi bethu ngokuchasene nokuphathwa gadalala, kwaye ngoku iifemu zethu ziqhuba kakuhle. Kodwa indlela yethu yindlela yamajelo amaninzi kwaye ayijolisanga kukhangelo ngokwalo. Siyayiqonda indlela i-ecosystem yamajelo edijithali axhasanayo ngayo.
Zingasekho iintsuku apho i-SEO yayisoloko igxile kumagama aphambili, i-backlinks kunye nephepha le-1. Iinjini zokukhangela ziya zisiba nobukrelekrele, yiyo loo nto inkokheli yeshishini u-David Amerland uyibeka, kwaye baya bephucuka ekuqondeni ngakumbi injongo yomsebenzisi kunye nendlela abanokuthi babonelele ngayo. Okwangoku, ukufaka nje indawo yakho ngamanqaku kunye nemizobo emihle ayizukuyisika ngaphandle kokuba ufunde okungakumbi malunga nezi zicwangciso kwaye ube ngcono kwi-SEO ye-2016. UJomer Gregorio, ukuThengiswa kweDijithali kwiiPhilippines
Ukuba ungumthengisi wentengiso yedijithali kwaye ufuna ukuba ngcono kwi-SEO, le infographic evela kuJomer ibetha kuzo zonke izinto eziphambili kulwakhiwo lwangoku lweinjini yokukhangela. Nazi iindlela ezisixhenxe eziphambili ze-7 SEO:
Qonda eyona nto ibalulekileyo kunye nokuGqibela okubalulekileyo ku-2016 - Ngoku ka moz, ubuhlobo obuphathekayo, ixabiso eliqondwayo, idatha yokusetyenziswa, ukufundeka, kunye noyilo oluphezulu kuluhlu. Amakhonkco ahlawulelweyo kunye nesicatshulwa se-anchor sehlile kwifuthe (kwaye amakhonkco ahlawulelweyo angenza nomonakalo wohlobo lwakho).
Lungiselela uPhando lweSelfown -Ukukhangela ngeselula kwandise i-43% ye-YoY, ngama-70% ophendlo lweselfowni olukhokelela kwisenzo kwiyure.
Gxila kwiinjongo zoMsebenzisi - Endaweni yamagama aphambili, cinga ngamagama aphambili anomsila omde kunye nezihloko ngokubanzi. Iinjini zokukhangela ziguqukile ukuze uqonde injongo yomsebenzisi, ukuze ubhale umxholo ongaphezulu wendalo obandakanyeka kumathemba nakwabafundi.
Ukuya ekuhlaleni iseyindlela elungileyo yokuhamba -Isiqingatha sazo zonke iivenkile ezikwi-intanethi ziyokundwendwela ivenkile kwangolo suku. Qinisekisa ukuba udweliswe ngokuchanekileyo kwi-Bing, Google, kunye ne-Yahoo! Ukukhangelwa kweshishini ngemiyalezo engaguqukiyo kuyo yonke indawo.
Ixesha elide lingcono - Yeka ukuvelisa umgca wemveliso engapheliyo yomxholo oluhlaza kwaye utyale imali kwinkulumbuso, kwimfundo nakwimixholo yemidiya emininzi enika olona lwazi lubalaseleyo kwi-intanethi kwizihloko ezithile.
Ukhuseleko lweSiza kunye ne-SEO Ukuhambisa indawo yakho kunxibelelwano olukhuselekileyo (njengoko senzile), inokubonelela ngomda owufunayo ngaphezu kwabakhuphisana nabo. Sisenzo esomeleleyo ukuba uqokelela naluphi na uhlobo lwedatha nangayiphi na indlela.
Yenza umxholo wakho uphendulwe ngelizwi -I-Apple Siri, uGoogle ngoku kunye neMicrosoft Cortana zonke zincedisa ngokubonakalayo kunye nokubanakho ukukhangela kunye nokufumana ulwazi kwi-intanethi. Kunye nomxholo omde, amanqaku apheleleyo anokukunika ithuba elingakumbi kukhangelo lwelizwi kunesiqulatho esingaphantsi komgangatho oluhlaza.
Nantsi iSicwangciso seCrafti se-2016 se-SEO
tags: 2016kukunikaubude bomxholointengiso yedijithali Philippinesyemizobohttpsizinto ezibalulekileyo zenqanabaJomer gregorioukugxila igama elingundoqoamagamayendawo seouphendlo lweselfowuniUkuphuculwa kokukhangela ngeselulaiimeko zenqanabai rankingsenjini yokukhangela nounSEOii-algorithms zokoseo ifileizinto zenqanaba le seozenqanaba seoSSLinjongo yomsebenzisiuphando lwezwi